म्याग्देली गायक कार्कीको ‘गलेश्वरको दर्शन’ बोलको भजन गीत सार्वजनिक (भिडियो सहित) - Myagdi Online
म्याग्देली गायक कार्कीको ‘गलेश्वरको दर्शन’ बोलको भजन गीत सार्वजनिक (भिडियो सहित)
6 महिना, 17 दिन अगाडि
3969 पटक पढिएको
म्याग्दी, २१ साउन। म्याग्दीका चर्चित लोकगायक रवि कार्कीको ‘गलेश्वरको दर्शन’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोषको प्रस्तुतीमा गलेश्वर मन्दिरको प्रचारप्रसार र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित निर्माण गरिएको सो गीत म्युजिक भिडियो सहित बजारमा ल्याइएको हो । साउने सोमबारको अवसर पारेर गलेश्वर मन्दिरमा एक कार्यक्रमकाबीच गीतको विमोचन गरिएको गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ ।
कोषका संरक्षक समेत रहेका म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीले सो म्युजिक भिडियोको विमोचन गरेका हुन् । गीत विमोचन गर्दै प्रजिअ अधिकारीले गलेश्वरलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउन आवश्यक प्रचारप्रसारमा जोड दिनुपर्ने बताएका थिए । धौलागिरी क्षेत्रमा गाइने मौलिक भजनको लय रहेको गीतको गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोषका उपाध्यक्ष प. भीमनाथ पराजुलीको शब्द सङ्कलन गरेका छन् ।
गलेश्वर मन्दिरलाई गीतसङ्गीतको माध्यमबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले भजन समावेश गरेर गीत तयार गरिएको शब्द सङ्कलक प. पराजुलीले जानकारी दिए । हाँस्यव्यङ्ग्य गर्नेमा दख्खल राख्ने गायक कार्की सानैदेखि साङ्गीतिक क्षेत्रमा सक्रिय छन् । उनले यसअघि आफ्नै पञ्चेबाजा गीत ‘बेनीबजारमा झर मायालु’ बजारमा ल्याइसकेका छन् । नेप्टेचौरमा जन्मिएका कार्की लोकगीत, लोकदोहोरी, हाँस्यव्यङ्ग्य र स्टेच प्रोग्रामहरुमा सहभागी हुँदै आएका छन् । गीतले म्याग्दी भ्रमण वर्ष–२०७५ को प्रचारप्रसार पनि सहयोग पुग्ने शिवालय क्षेत्र विकास कोषको भनाइ छ ।